यी हुन् संसारका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूला युद्धहरु, जुन युद्धमा खर्च भएको थियो सयौं खर्ब डलर-Nepali online news portal
यी हुन् संसारका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूला युद्धहरु, जुन युद्धमा खर्च भएको थियो सयौं खर्ब डलर
विभिन्न सयममा हुने युद्धका कारण ती मुलुक आर्थिक रूपमा कमजोर बन्छन् । यसकारण शक्तिशाली राष्ट्र पनि आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको इतिहास छ । नयाँ पत्रिकाकर्मी श्रीलोचन राजोपाध्यायले एजेन्सीको सहयोगमा विश्वका १० ठूला युद्ध र खर्च (डलरमा) खोजेका छन् ।
१. दोस्रो विश्वयुद्ध (१९३९–१९४५) खर्च – २,२५,५०० अर्ब
सन् १९३९ को सुरुमा जर्मनीले पोल्यान्डमाथि बम वर्षा गर्‍यो । अनि सुरु भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध । बेलायत र फ्रान्सको संयुक्त सेनाले जर्मनी र इटालीमाथि आक्रमण गरे । जर्मनीका चान्सलर हिटलरले बेलायत र फ्रान्सविरुद्ध प्रत्युत्तर दिए । यता, एसियामा पनि यसको असर देखियो । एसियन राष्ट्र पनि आफूलाई शक्तिशाली देखाउन युरोपतिर हानिए । सन् १९४१ मा जापानले एक्कासि जर्मनी र इटालीका बन्दरगाहमा हमला गर्‍यो । अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा दुई शक्तिशाली अणु बम खसालेको थियो । हिरोसिमामा मात्र हजारौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाए । पोल्यान्डबाट सुरु भएको विश्वयुद्ध जापानको हिरोसिमामा आएर समाप्त भएको मानिन्छ । युद्धमा लाखौँले ज्यान गुमाए । अहिलेसम्म दोस्रो विश्वयुद्ध सर्वाधिक महँगो मानिन्छ । तथ्यांकअनुसार दोस्रो विश्वयुद्धमा दुई लाख २५ हजार पाँच सय अर्ब डलर खर्च भयो ।
२. ट्विन टावर आक्रमणपछि (२००१–२०११) खर्च – १,१०,००० करोड
ओसामा बिन लादेनको अल कायदाले ११ सेम्टेम्बर २००१ मा अमेरिकाको प्रमुख व्यापारिक तथा प्रशासनिक भवन ट्विन टावरमा दुई हवाईजहाज ठोक्कायो । उनीहरूले वासिङ्टनमा समेत आक्रमण गरे । ट्विन टावरमा पाँच हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो । यो घटनासँगै अमेरिकाले ओसामालाई आतंककारी सूचीको पहिलो नम्बरमा राख्यो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुस र त्यसपछिका राष्ट्रपतिहरूले प्रमुख योजनाकार ओसामा बिन लादेनको हत्या प्रयास गरिरहे । २०११ मा पाकिस्तानको एटमाबादमा गोप्य सैनिक आक्रमणमा उनको हत्या भयो । ओसामा र आतंककारीलाई विश्वबाटै हटाउने योजनासहित अमेरिकाले १० वर्षमा एक लाख १० हजार करोड डलर खर्च गरेको थियो ।
३. भियतनाम युद्ध (१९६५–१९७५) खर्च – ७३,८०० करोड डलर
अमेरिकाले आक्रमण गरेपछि भियतनाममा १० वर्षसम्म युद्ध चल्यो । भियतनामको कम्युनिस्ट सरकार हटाउन अमेरिकाले त्यहीँका केही नागरिकलाई प्रयोग गरेर युद्धमा होमिएको थियो । तर, भियतनाम सरकारले अमेरिकासँग गुरिल्ला शैलीमा युद्ध लड्यो । जनताले भियतनाम सरकारको साथ दिँदै युद्धमा होमिए । अमेरिकाले सरकारबाट समर्थनप्राप्त गुरिल्लासँग लड्न सकेन । बिस्तारै अमेरिका लडाइँबाट पछि हट्यो । अमेरिकाले भियतनामविरुद्ध आक्रमण गरेपछि त्यहाँका नागरिकले निकै सास्ती झेले । तर, लडाइँमा सरकारलाई साथ दिइरहे । युद्धमा भियतनामका लाखौँ मानिस घरविहीन भए । १० वर्षसम्म चलेको युद्धमा ७३ हजार आठ सय करोड डलर खर्च भएको थियो ।
४. कोरियन युद्ध (१९५०–१९५३) खर्च – ३४,१०० करोड डलर खर्च
भियतनाममा युद्ध हुनुअघि दक्षिण र उत्तर कोरिया युद्धमा थिए । कोरियन युद्धमा उत्तर कोरियालाई सोभियत संघ र चीनले साथ दिएका थिए । दक्षिण कोरियालाई अमेरिकालगायत केही पश्चिमी राष्ट्रले सहयोग गरे । दक्षिण र उत्तर कोरियाबीचको लडाइँमा परमाणु हतियारको प्रयोग भएको मानिन्छ । ५० को दशकबाट सुरु भएको युद्धका कारण उत्पन्न दुस्मनी दुई कोरियाबीच अझै कायम छ । तीन वर्षसम्म चलेको युद्धमा ३४ हजार एक सय करोड डलर खर्च भएको मानिन्छ ।
५. पहिलो विश्वयुद्ध (१९१७–१९२१) खर्च- ३३,४०० करोड डलर
बेलायतले जर्मनीको एक यात्रुबाहक जहाजलाई समुद्रमा आक्रमण गरी डुबाएपछि जर्मनीले त्यसको प्रतिशोध लिन बेलायतमा आक्रमण गरेको थियो । यहीँबाट पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भयो र चार वर्षसम्म चल्यो । विश्वयुद्धमा युरोप दुई समूहमा विभाजित भयो । एकातिर बेलायत, फ्रान्सलगायत अन्य स–साना राष्ट्र थिए । अर्कोतिर जर्मनी, बुल्गेरिया, अस्ट्रिया, हंगेरी तथा टर्की थिए । दुवै समूहलाई अमेरिकाले हतियार उपलब्ध गराएको थियो । पहिलो विश्वयुद्ध सन् १९१४ मा सुरु भयो । तर, अमेरिका स्वयं सन् १९१७ मात्र पहिलो विश्वयुद्धमा समावेश भयो । विश्वयुद्धमा बाहिर बसेर प्रभाव बनाउन नसकेपछि अमेरिका सीधै युद्धभूमिमै होमिएको थियो । यसमा ३३ हजार चार सय करोड डलर खर्च भयो ।
६. खाडी युद्ध (१९९०) खर्च – १०,२०० करोड डलर
सन् १९९० मा इराकी शासक सद्दाम हुसेनले कुवेतमाथि अचानक हमाल गरे । सद्दामको एउटै दाबी थियो, कुवेत पनि इराककै एक भाग हो । इराकले कुवेतमाथि आधिपत्य जमाउनु भनेको अमेरिकी तथा युरोपियन राष्ट्रले तेल नपाउनु थियो । इराकले कुवेतपछि लगत्तै साउदी अरबमा हमला गर्‍यो । कुवेत र अरबी मुलुकमा आक्रमण भएपछि पश्चिमी राष्ट्रमा इन्धनको समस्या आयो । साउदीले इराकको आक्रमणबाट बच्न अमेरिकासँग सहयोग माग्यो । इराकविरुद्धको युद्धमा फ्रान्सेली सैनिकले पनि अमेरिकाको साथ दिए । पश्चिमा राष्ट्रले यो युद्धमा १० हजार दुई सय करोड डलर सकाए ।
७. सिभिल वार (१८६१–१८६५) खर्च – ७,९७० करोड डलर
अमेरिकामा गुलामी प्रथाबाट दिक्क मानेर धेरै राज्य विरोधमा उत्रिए । ती राज्य स्वतन्त्र हुन चाहन्थे । तर, कतिपय राज्य गुलामीमै बस्न रुचाए । राज्यहरू दुई पक्षमा बाँडिए । यही कारण १८औँ शताब्दीमा अमेरिका दुई भागमा विभाजित भयो । दुई पक्षबीच युद्ध भयो । चार वर्षको युद्धमा धेरै व्यक्तिले ज्यान गुमाए । यस युद्धमा सात हजार नौ सय ७० करोड डलर खर्च भयो ।
८. स्पेन–अमेरिका युद्ध (१८९८ १८९९) खर्च – ९०० करोड
सन १८९८ मा क्युबा स्पेनको कब्जामा थियो । अमेरिकाले स्पेनलाई क्युबा छाड्न निर्देशन दियो । तर, स्पेन पछि हट्न तयार भएन । क्युबाकै कारण स्पेन र अमेरिकाबीच युद्ध भयो । यो युद्धबाट अमेरिकाको विस्तारवादी नीति सुरु भयो । अमेरिकाले क्युबा, पोटिरिको तथा फिलिपिन्समाथि कब्जा जमायो । क्युबाबाट स्पेनलाई धपाउन अमेरिकाले नौ सय करोड खर्च गरेको थियो ।
९. अमेरिकी क्रान्ति (१७७५–१७८३) खर्च – २४० करोड डलर
ब्रिटिस साम्राज्यवाद अमेरिकातिर बढिरहेको थियो । ब्रिटिसले अमेरिकावरपर १३ उपनिवेश बनाइसकेको थियो । अमेरिकाले ब्रिटिससँग समान अधिकार माग्यो । ब्रिटेन अमेरिकालाई उपनिवेश नै राख्न चाहन्थ्यो । अमेरिकाले टेक्सेसनको विवाद उठायो । टेक्सेसन विवाद युद्धमा परिणत भयो । यो युद्ध आठ वर्ष चल्यो । पछि सन् १८८३ मा पेरिसमा दुई पक्षबीच सन्धि भयो । यहाँबाटै अमेरिका स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्थापित भयो । यो युद्धमा दुई सय ४० करोड डलर खर्च भएको मानिन्छ ।
१०. मेक्सिको युद्ध (१८४६–१८४९) खर्च – २३७ करोड डलर
सन् १८४५ मा अमेरिकाले टेक्सासमा कब्जा जमायो । टेक्सासलाई आफ्नो अधीनमा लिन अमेरिकाले सैनिक परिचालन गरेको थियो । अमेरिकाले न्यु मेक्सिकन तथा क्यालिफोर्निया कब्जामा लियो । तर, मेक्सिको युद्धबाट पछि हटेन । मेक्सिकोसँग केही सीप नलागेपछि अमेरिका नै पछि हट्यो । यो युद्धमा दुई सय ३७ करोड डलर खर्च भएको तथ्यांक छ।